टी–२० सिरिजः भारतले गुमायो एकै ओभरमा २ विकेट ! – Everest Dainik – News from Nepal
टी–२० सिरिजः भारतले गुमायो एकै ओभरमा २ विकेट !
काठमाडौं, माघ २३ । टी–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा न्यूजिल्याण्डले दिएको २२० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतले चौथो विकेट गुमाएको छ । उसले एक ओभरमा दुई विकेट गुमायो । तेस्रो विकेटका रुपमा ऋषभ पन्त (४) र चौथौ विकेटको रुपमा विजय शंकर (२७) लाई गुमाएको हो ।
उनीहरुलाई न्यूजिल्याण्डका मिचेल सेन्टनरले आउट गरे । यसअघि, शिखर धवन (२९) र कप्तान रोहित शमा (०) आउट भइसकेका छन् । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको घरेलु टोली न्यूजिल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २१३ रन बनायो ।
उसका लागि टिम सेफर्टले सर्बाधिक ८३, कप्तान केन विलियम्सन र कोलिन मुन्द्रोले समान ३४ रन बनाए । बलिङमा भारतका हार्दिक पान्ड्या २, भुवनेश्वर कुमार, खलिल अहमद, कुर्नाल पाण्ड्या र युजवेन्द्र चहलले समान एक विकेट लिए । भारतले केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ ।